ဖလားရပြီး လူမဝယ်တဲ့ လီဗာပူးလ်ကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဒီဘရိုင်း - Shwe Soccer
ဖလားရပြီး လူမဝယ်တဲ့ လီဗာပူးလ်ကို ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဒီဘရိုင်း
မန်စီးတီး ကွင်းလယ် ကစားသမား ဒီဘရိုင်းက PFA ဆုရပြီးနောက် အနည်းငယ်အကဲဆတ်နေသလို မီဒီယာကနေ ဝေ‌ဖန်မှု့တွေ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်လာပါတယ်။ မက်ဆီကို ခေါ်ယူချင်တဲ့ ကိုယ့်အသင်းကိုယ် ပြန်ဝေဖန်ခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုင်းက ယခုတစ်ခါမှာလည်း လိဂ်အတွင်း အဓိက ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ လီဗာပူးလ်ကို အပြောင်းရွှေ့မှာ လူဝယ်ယူမှု့မရှိတာနဲ့ ပက်သက်ပြီး ဖလားရပြီးပျော်ရွှင်နေသူတွေလို့ ဝေဖန်လိုက်ပြန်ပါတယ်။
လီဗာပူးလ်က ယခုရာသီမှာ တီမိုဝါနာ ကိုခေါ်ယူချင်ပေမယ့် လက်လွှတ်ခဲ့ရသလို လက်ရှိမှာလည်း သီယာဂိုအလ်ကန်တာယာခေါ်ယူရေးကမရေရာမှု့တွေ ဖြစ်နေလို့ လီဗာပူးလ် ပရိတ်သတ်တွေစိတ်ပျက်နေချိန်မှာ ဒီဘရိုင်းက စကားစစိထိုးလိုက်တာကြောင့်အတော်လေး ခံရခက်မှာတော့ အသေချာပါပဲ။
MANCHESTER, ENGLAND – JULY 02: Virgil van Dijk of Liverpool interacts with Kevin De Bruyne and Pep Guardiola, Manager of Manchester City after the Premier League match between Manchester City and Liverpool FC at Etihad Stadium on July 02, 2020 in Manchester, England. Football Stadiums around Europe remain empty due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in all fixtures being played behind closed doors. (Photo by Peter Powell/Pool via Getty Images)
ဒီဘရိုင်းက “တစ်ခါတစ်ရံလူတွေက အောင်မြင်မှု့ကြီးကြီးမားမားရပြီးရင် ဒီခံစားမှု့ထပ်ရဖို့ကို ကြိုစားလေ့မရှိတော့ပါဘူး။ဒီခံစားချက်မျိုးကို တူညီတဲ့အသင်းတစ်ခုထဲနဲ့ထပ်လုပ်ဖို့ကတော့ ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလေ။ဘဝမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဆို အပြောင်းလဲများစွာကြုံခဲ့ဖူးပြီးပါပြီ။ သေးငယ်တဲ့အရာ ဆိုရင်တောင် ဘဝကိုပြောင်းလဲလိုက်နိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိနေပါတယ်။ဒဏိရာ၊လူနေမှု့ဘဝ အရာရာကထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ဘောလုံးဆိုတာက အစဉ်အမြဲတိုးတက်ဖို့နဲ့ လိုက်လျောညီထွေရှိဖို့လိုပေမယ့်ဘတစ်ကြိမ်အောင်မြင်ပြီးရင်တော့ နောက်တစ်ကြိမ်ဆိုတာကို တွေးဖို့ကပိုပြီးခက်ခဲပါလိမ့်မယ်”။
“ကျနော့်အထင် လီဗာပူးလ်က ဒီအဆင့်ကိုရောက်‌နေတယ်ထင်ပါတယ်။ကျနော့်အနေနဲ့တောလ ဖလားရတဲ့ခံစားချက် မျိုး ရှိစေဖို့ ဒီအသင်းကို ပြောင်းလဲဖို့မလိုဘူးလို့တွေးတာကလည်းမမှားပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့ဘယ်လိုတွေးနေလည်းမသိပေမယ့် ဒါကသူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အတွေးပဲလေ။တစ်ခါတစ်လေ မှာ အောင်ပွဲတွေက အာရုံစူးစိုက်မှု့ကိုလျော့ကျစေသလို အောင်ပွဲတွေကပဲ ပိုပြီးဆာလောင်စေတဲ့စိတ်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူတို့ဘာတွေးနေလည်းဆက်ကြည့်ရအောင်ပါ”။
ယူနိုက်တဒ်ပရိတ်သတ်တွေ ပျော်ရွှင်ရမယ့်သတင်း သယ်ဆောင်လာတဲ့ ဆန်ချို
Previous Article စီးရီးအေမှာ ရော်နယ်ဒိုရဲ့ ဂန္ထဝင်တွင်မှုတွေ ရပ်တန့်တော့မှာလား?
Next Article ဘာကာရဲ့နာမည်ကျော်တီကီတာကာကစားကွက်ကို စွန့်လွှတ်မယ့် ကိုးမန်း
Bundesliga News / EPL News
မန်ယူနိုက်တဒ်အသင်းရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာ အဓိက ပစ်မှတ်ကစားသမားဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဂျေဒန်ဆန်ချိုကဒေါ့မွန်အသင်းမှာ မပျော်မရွှင်ဖြစ်နေတယ်လို့ ဂျာမဏီကလာတဲ့ သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ ဆန်ချိုက အပြောင်းရွှေ့မပိတ်သေးတဲ့ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ရာသီအစမှာထဲက ယူနိုက်တဒ် ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီး ဒေါ့မွန်အသင်းကို ဖိအားပေးတောင်းဆိုခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဂျေဒန်ဆန်ချို အနေနဲ့ ယူနိုက်တဒ်ကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ဗိုလ်လုပွဲကိုပါ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ရောဂါဖြစ်နေတယိဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ အသင်းလူစာရင်းကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့် လန်ဒန်မှာ ပြုလုပ်တော့ ပါတီကိုတော့တက်ရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ …
အသင်းတန်ဖိုးအထားဆုံးအရာကို မက်ဆီရဲ့နာမည်တောင်ပြောင်းပေးသင့်တယ်လို့ ပီကေးပြောဆို
ဘာစီလိုနာ အသင်းခေါင်းဆောင် ဂျာရတ်ပီကေး ကတော့ ကလပ်အနေနဲ့ လီယွန်နယ်မက်ဆီအပေါ်လေးစားမှု့ရှိဖို့နဲ့ သူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဖြည့်ဆည့်ဖို့လိုတယ်လို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ပီကေးက မက်ဆီအလွန်ကို ကြိူတင်စဉ်းစားထားဖို့လိုပြီလို့ဆိုခဲ့သလို သွေးသစ်လောင်းဖို့အတွက်လိုအပ်ရင် သူကိုယ်တိုင် ထွက်ပေးဖို့လည်းအသင့်ရှိတယ်လို့ ယခင်ကဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ မက်ဆီရဲ့ ထွက်ခွာလိုကြောင်း တင်ပြခဲ့မှု့အပေါ် ဥက္ကဌဘာတိုမြူ က ပယ်ချခဲ့တာကြောင့် ဥပဒေကြောင်းအရဖြေရှင်းဖို့အထိဖြစ်ခဲ့ကြပြီး စာချုပ်ပါအချက်အရ တစ်နှစ်သာ သည်းခံဖို့လိုအပ်လို့မက်ဆီဖက်ကလျှော့ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိအခြေအနေအရ လာမယ့်ရာသီမှာ ဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပြီး ဘာစီအနေနဲ့ မက်ဆီအလွန်ခေတ်ကိုစတင်ပြင်ဆင်ရပါတော့မယ်။ …
နတ်ဘုရားတန်ခိုးနဲ့ ဘုန်းမီးနေလတောက်လာတဲ့ အေစီမီလန်
တစ်ခေတ်တစ်ခါ က အချိန်တွေသာ ပြန်သွားခွင့်ရမယ်ဆိုရင် ၂၀၀၀ ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကို သေချာပေါက်ပြန်သွားလိုသူတွေထဲ အေစီမီလန် ပရိတ်သတ်တွေထိပ်ဆုံးကပါဝင်ပါလိမ့်မယ်။ ဆန်စီရို ဘုန်းမီးနေလ တောက်ချိန်တုံးက ဥရောပတစ်ခွင်မှာ ဒိတ်ဒိတ်ကြဲဆိုသူတွေကိုပဲစုစည်းထားတဲ့ အေစီမီလန် က ဥရောပဗိုလ်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။ ရီးရဲလ်မက်ဒရစ် အတွက် မနာလိုစရာအကောင်းဆုံးပြိုင်ဘက်ဖြစ်ခဲ့သလို ထိုစဉ်က အေစီဆိုတာ ဇီဒန်း ပါတဲ့ ယူဗင်းတပ်စ်တောင် မနိုင်တဲ့ အနေထားမျိုးထိ တောက်ပခဲ့ဖူးတာပါ။ ရှဗ်ရှန်ကို၊မာလ်ဒီနီ၊ဂတ်တူဆို၊အမ်ဘရိုစီနီ တို့နဲ့ထင်တိုင်းကြဲအေစီမီလန်က …